Fiatrehan’i Madagasikara ny Coronavirus Maro ireo teboka miteraka ahiahy
Faritra Vakinankaratra "Ambulance" tratra nitondra olona an-tsokosoko
Fiara mpitondra marary iray no saron’ny zandary nitondra olona an-tsokosoko avy any Antananarivo tany amin’ny Faritra Vakinankaratra.
Lakandranon’i Pangalana Hita fatin’ilay zandary latsaka tanaty rano
Hita ny marainan'ny omaly 26 mey 2020 tamin'ny 6 ora ny vata mangatsiakan' Itompokolahy Tsilangoui Angelico, Zandary kilasy faharoa niasa tao amin'ny
Efa vonona amin’ny fiatrehana ny valan’aretina Coronavirus i Madagasikara, raha ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny fitondrana.
Miainà tsotra mihitsy moa fa aza manaiky hadalaina, hoy ny voambolan’ilay minisitra iray izay fa tsy mafy noho ny Pesta sy Kolerà io. Mampametra-panontaniana anefa ny fepetra raisin’ny fitondram-panjakana Malagasy ankehitriny manoloana ny fihanak’io valan’aretina io eto amin’izao tontolo izao ankehitriny. Ny hanidy ny sisin-tany aloha izany, raha ny voambara hatrany, dia tsy azo handresena lahatra ireo mpanapa-kevitra mihitsy. Na ny tarehimarika mivoaka aza anefa tsy hita izay handraisana azy ary tsy ampy ny fanazavana. Omena ohatra ny isan’ireo mpandeha ahiahiana araha-maso etsy Anosiala. Fa misy koa anefa mpandeha araha-maso fotsiny izay tsy mazava hoe inona no antony? Miisa 16, raha ny voaray ny sabotsy teo izany, ho an’ny etsy Anosiala. Misy 24 araha-maso koa, raha ny voalaza, etsy Mahamasina ary miisa 4 ireo araha-maso any an-tranony. Tsy mbola misy ahiahiana izany ve ireo fa dia araha-maso fotsiny ary tsy ampy ve ny fandriana ao Anosiala no misy koa eny Mahamasina? Etsy ankilany, dia misy dingana arahana izay miainga any amin’ny minisiteran’ny fahasalamana, hoy ireo tompon’andraikitra, vao afaka manao fitiliana ireo ahiahiana ny “Institut Pasteur de Madagascar”. Ny fanatsotsoran-dresaka amin’ny hoe mbola tsy ilaina ny manao tampim-bava moa dia efa tsy hita intsony izay ilazana azy. Hatreo fotsiny dia hita fa maro ireo teboka tsy maharesy lahatra manoloana ny filazana fa efa vonona isika. Misy ary tena ampy ve ny enti-manana hiatrehana ity areti-mandoza ity sa tsia?